मकै खानुहुन्छ ? मकै खानुका ५ फाइदा यस्तो छ ! – NepalayaNews.com
मकै खानुहुन्छ ? मकै खानुका ५ फाइदा यस्तो छ !
११ श्रावण २०७७, आईतवार १५:१०
आज भोलि मकैको सिजन चलिरहेको छ। हामी कतिपयको बानी मकै पोलेर खाने हुन्छ भने कतिपयको भुटेर भटमास मिसाएर खाने हुन्छ । कतिपयलाई मकै खानु स्वास्थ्यको लागि एकदम फाइदाजनक हुन्छ भन्ने थाहा नहुन पनि सक्छ। पानी परेको समयमा मकै भटमास चियासँग खान एकदम मज्जा हुन्छ । मकै प्राय सबै पसलमा अहिले भेटिने गरेको छ । के हो त मकै खानुको फाइदा, यसले कसरी स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याउछ त ?
हेर्नुहोस् यी ५ फाइदा
जुन मानिस पाचन क्रियाको समस्यासंग लडिरहेको हुन्छ उसको लागि मकै खानु फाइदाजनक हुन्छ । यसमा फाइबर हुने हुँदा पाचनक्रियाको ठिक गर्न सक्रिय हुन्छ ।
आँखाको लागि लाभदायक
आँखाको लागि पनि मकै खानु एकदम फाइदाजनक हुन्छ। मकैमा भिटामिन ए को मात्रा हुने हुँदा आँखा देख्ने क्षमता शक्ति मजबुत बनाउदछ । मकैमा हुने
कैरोटोनॉइड को मात्राले पनि आँखाको लागि अधिक फाइदाजनक मानिन्छ ।
मकैमा हुने एंटीऑक्सीडेंटले छाला सफा गर्ने कार्य गर्दछ। एंटीऑक्सीडेंटको मात्राको कारण स्किन पिग्मेन्टेशनको जोखिम समेत निकै कम हुन्छ।
इम्युनिटी पावर बढाउछ
मकैले हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता समेत बढाउने गर्दछ। इम्युनिटीको मजबूत बनाउन मकै खानु अति आबस्यक मानिन्छ। एक वैज्ञानिक अध्ययनका अनुसार, मकैमा हुने विशेष गुण ह्युमन सेल्सको मजबूत बनाउने क्षमता राख्दछ । यसका कारण हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन मकै खानु आबस्यक छ।
मकैले हाम्रो हड्डी समेत एकदम बलियो बनाउदछ। मकैमा क्याल्सियम हुने हुँदा हड्डी बलियो हुन्छ । हड्डी बलियो बनाउन क्याल्सियमको आबस्यकता हुने गर्दछ जुन मकैमा प्रसस्त हुने गर्दछ । यदि कसैलाई आफ्नो शरीर बलियो बनाउनु छ भने पहिले हड्डी मजबुत बनाउनु आबस्यक छ । त्यसको लागि मकै खानु अतिआवश्यक छ।एजेन्सी
अमेरिकाको ल्यानिफोर्निया जंगलमा भीषण डढेलो, ८ हजार मानिसले घर छाडे ११ श्रावण २०७७, आईतवार १५:१०
अमेरिकाले ब्रिटेन, फ्रान्स,भारतको अर्थव्यवस्था भन्दा बढी कोरोना राहत वितरण गर्‍यो ११ श्रावण २०७७, आईतवार १५:१०
ट्रम्पले मागे टिकटक विक्रीको हिस्सा ११ श्रावण २०७७, आईतवार १५:१०